KwiSky Tower Kusindiswa Ubomi Bomntu
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArabhu IsiArmenia IsiArmenia (saseNtshona) IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiCambodia IsiChichewa IsiChuvash IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiFante IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHebhere IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiNgesi IsiNorway IsiOssetia IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiRarotonga IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTarascan IsiTigrinya IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUrdu IsiValencian IsiXhosa IsiZapotec (saseLachiguiri) IsiZulu
UGraham Browne, iNgqina likaYehova elineminyaka eyi-80 lancedisa amapolisa ekusindiseni enye indoda ephazamiseke engqondweni eyayiza kutsiba kwisakhiwo esinobude obuziimitha eziyi-328, esiyiSky Tower eAuckland, eNew Zealand. UGraham uthi, “le ndoda yafuna ukuthetha namaNgqina kaYehova, aza amapolisa andibiza ukuze ndiyincede.”
“Abasebénzi besi sakhiwo bandinxibisa amabhanti aza kundikhusela aza abophelela neBhayibhile ngentambo ende. Amapolisa anyuka nam, saya kumgangatho oziimitha eziyi-192 ukusuka ezantsi. Apho kwakukho umoya onenkwankca. Le ndoda yayifuna ukutsiba kwesi sakhiwo yayikufutshane nam, imilenze yayo yayisele iyijingisa emoyeni.
Ndakhwaza ndisithi ndiliNgqina likaYehova kwaye ndifuna ukuyinceda. Emva kokwenza umthandazo wangaphakathi, ndatyhila iBhayibhile ndaqalisa ukuncokola nayo.
“Ndathetha ngendlela ubomi obungcwele ngayo, le ncoko yayidibana nentetho endandisandul’ ukuyenza kwiHolo yethu yoBukumkani.
“ Ndathi ‘ubaluleke kakhulu kuThixo ibe ukunike isipho esihle esibubomi. Kutheni ungambonisi nje ukuba usixabisile esi sipho akunike sona? Ndicela uze ngapha ngakum.’
“Ndamfundela iZibhalo eziliqela, kunye noYohane 3:16 othi: ‘Kuba uThixo walithanda kakhulu ihlabathi kangangokuba wanikela ngoNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze wonk’ ubani obonisa ukholo kuye angatshabalali kodwa abe nobomi obungunaphakade.’
“ Ndamxelela ukuba, ‘uThixo uyamthanda, kwaye ufuna aqhubeke ephila.’
“Ekuqaleni kwakungathi le ndoda ayimamelanga. Ndenza umthandazo wangaphakathi, ndimcela uYehova ukuba andincede ndikwazi ukufikelela intliziyo yale ndoda. Ekugqibeleni, yaphakama yaza yasondela ngakum. Yayikhathazekile.
“ Yathi ‘bekufike amaNgqina pha kwam, kodwa mna ndawagxotha, Ndiyazisola ngaloo nto. Ndicel’ undixolele.’
UGraham wathi, “ ‘Nabanye bethu babeyenza loo nto ngaphambi kokuba ngamaNgqina. Ndiyakuqinisekisa ukuba uYehova uza kukuxolela.’
“ Yathi le ndoda, ‘Enkosi, kutsho kwexibilili.’
“ Ndathi, ‘Yazi ndiyakoyikisela, ndinxibe la mabhanti andikhuselayo, kodwa ukuba wena uyatyibilika uza kuwa ubomi bakho obuxabisekileyo buphele. UYehova akanokuyithanda loo nto. Yiza kweli cala ke.’
“Ndabona ukuba uzolile noko ngoku. Wathi ‘kulungile ndiyeza.’
“Wasondela kum, aza amapolisa amnceda amsa kwindawo ekhuselekileyo. Sasinexesha elingangeyure sithetha.”
AmaNgqina kaYehova ayabathanda abantu ngokukodwa abo baxinezelekileyo. Ehlabathini lonke asebenzisa iZibhalo ukuze ngazo anike abantu ithemba nentuthuzelo yokuba uThixo usikhathalele.